Ardey Somaliland ku sugan oo jaamacad ka dhigta Iswiidhen - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Gabdho ardey ah oo dugsi hoose ka dhiganeysa Garawoe Soomaaliya. Sawirle Simon Maina/scanpix
Ardey Somaliland ku sugan oo jaamacad ka dhigta Iswiidhen
La daabacay fredag 17 januari 2014 kl 10.16
Ardey ku sugan Soomaaliland ayaa tacliinta masterka ee umulisada ka dhigta jaamacadda Högskolan Dalarna ee dalkan Iswiidhen. 2013 bishii koobaad ayey dufcadii ugu horeysey ardeydan bilaaben jamacadan. Waxaana la filayaa Sannadka 2015 in ay ka qalin jabiyaan jamacadan oo qaatan shahaadada masterka. Goolkana waa sidii ardeydan u noqon laheyd macallimiin soo saaro fac cusub oo umulisooyin ah sida ay tiri Fatumo Ahmed Osman oo bare ka ah jamacadan Högskolan Dalarna.
Sida lagu sheegey warbaxin ay soo saartey 2011 ururka qaramada midoobey ee caruurta Unicef Soomaaliya ayaa kamid ah waddama ay caalamka ku badan yahiin geerida caruurta gaar ahaan caruurta markey dhashaan geeriyooda, iyo weliba hooyooyinka umul raacda. Soomaaliya guud ahaan waxaa ka taagan gabaabsi dhanka umulisooyinka tacliinta leh ayey tiri Fatumo Osman oo macallin ka ah jamacadda Dalarna.
Ardeyda iminka jamacada Dalarna siiso waxbarashada masterka ee Umulisada ayaa ah 26 ardeyda. Oo ka kale soo jeeda jamacadaha Camuud iyo Haregsya University. Mashruucan wax lago gol leeyahey in lagu soo saarayo barayaal umulisooyin macaalimiin noqda si loo hormariyo daryeelka caafimaadka caruurta iyo hooyada. waxaan maageliya heyadda horumarinta dalkan Iswiidhen ee SIDA. Dakhliga ay heyadda ku baxineyso waxbarashada masterka ah ee umulisada ayaa ah 4,2 miljan oo karoon lacagta Iswiidhen. Hirgelinta mashruucan waxuu ku soo bilaamadey xiriiro badan oo jamacadda Dalarna la sameysey xarumaha tacliinta ee Soomaaliland sida ay sheegtey Fatumo Osman.
Tacliin siinta ardeydan ayaa ku baxeysa qadka internet, ayada qalabka ay ardeyda wax ku bartaan sida artikelada iyo qoraalada ay ardeydo ka heleyaan maktabada jacaamada ay ku dhex leedahey internetka. Seminaarada badankood waxey jamacadda u bixisaa si toos ah, inkastoo qaarkood la sii duubo sida ay Fatumo sheegey. Ardeydana video toos ah ayey ku arki karaan macallimiinta lakjarada bixinaya laakiin madaama qadka internetka ee soomaaliland aad u hooseyo ayeysan macallimiinto arki karin ardeyda.
Laakiin marka la gaaro xilliga imixaanada qaadista ayey macallimiinta u socdaalan hargeysa si ay ardeyda imtixaanada uga soo qaadaan.
Ardeyda dhigata korsadan masterka ee umulisada ayaa waxbarashada dhigta waqti dhiman ayaga oo shaqooyinkooda xilli buuxa ka shaqeysta sida ay tiri Fatumo Osman. Dufcada ugu horeysana waxaa la filayaa in ay qalin jabiyaan bartamaha 2015
In waxbaraashadan umuliso ee masterka lagu bilaabo Soomaaliland waxaa u sabab ah jawiga amni ee ka jira halkas laakiin qorshaha jamacadda sida ay Fatumo Osman sheegtey ayaa ah in waxbarashooyin noocaan oo kale ah ay jamacadda Dalarna gaarsiiso dalka Soomaaliya intiisa kale.